महिलालाई प्रभाव पार्न पुरुषमा हुनु पर्छ यस्ता गुण ! – Online Khabar 24
महिलालाई प्रभाव पार्न पुरुषमा हुनु पर्छ यस्ता गुण !
October 14, 2021 by admin admin
काठमाडौँ: महिलाहरु चाहन्छन् आफुले संगत गर्ने पुरुष संस्का’री र सहयोगी होस् ।
प्राय महिलाहरुले विश्वसिलो, इमान्दार र सहयोगी पुरुषसंग संगत गर्न चाहेका हुन्छन् । त्यति मात्रैले हुन्न महिलालाई प्रभाव पार्न कस्तो गुण हुनुपर्छ हेरौं ।
महिलालाई आ’दर गर्ने : हरेक महिलाहरु आफ्नो पुरुष साथीले आफ्नो आदर र इज्जत गरोस् भन्ने चाहन्छ । हेपेर बोल्ने र कुरा काट्ने पुरुष महिलालाई मन पर्दैन महिलाको इज्जत नगर्ने पुरुषहरुलाई उनीहरु मन पराउँदैनन् ।
सुरक्षा दिने : महिलाहरुले आफ्नो पुरुष साथीप्रति चाहना राख्ने अर्को गुण उनीको सुरक्षा गर्न सक्नु । हरेक महि लाहरु आफ्नो पुरुष साथीबाट जुनसुकै अवस्थामा पनि आफू सुर’क्षित छुँ भन्ने आभाष गर्न चाहन्छन् । व्यक्तिगत तथा सामाजिक दुवै रुपबाट पुरुषले महिलालाई सुर’क्षा दिन सक्नुपर्छ । कुनै पुरुषबाट आफू असु’रक्षित छुँ भन्ने लागेमा महिलाहरु त्यस्ता पुरुषको नजिक बस्न चाहदैनन् ।
धैर्यता : धैर्यवान पुरुषलाई महिलाहरु बढी मन पराउँछन् । यौ’न सम्प’र्कको बेलामा मात्र होइन कि हरेक समयमा पुरुषहरुमा धैर्यता हुनु पर्छ । साना साना कुरामा आत्ति’ने, चिन्ता गर्ने, एउटै कुरालाई सोचेर बसिराख्ने पुरुष महिलाहरुले मन पराउदैनन् ।
नम्र एवं सहयोगी : घमण्डी तथा रिसाहा पुरुष महिलाहरुलाई मन पर्दैन । गम्भि’र, न’म्र र शान्त स्वभावका पुरुषहरु धेरै महि लाहरुले रुचाउँछन् । गफिएर बस्ने, हल्ला गर्ने एवं ठट्टा गर्ने पुरुषहरुलाई महिलाहरुले क्षणिक रुपमा मन पराए पनि लामो समय मन पराउदैनन् । साभार गरियको खबर । यो पनि पढनुस, पति पत्नीबीच बेलाबेलामा झगडा पनि हुन्छ भने प्रेमपनि हुने गर्दछ।
यी उपाय अप्नाउनुहोस् – शिव लिं,गको पुजाः पति पत्नीले आफ्नो झगडाबाट बच्नका लागि सोमबार एकसाथ भगवान् शिवको पुजा आरधना गर्नु भएमा तपाईको सम्बन्धमा सुधार आउन सक्छ। सिन्दुरको डिब्बा पति सुत्ने ठाउँमा राख्नेः यदी पती पत्नीबीच झगडा भइरहन्छ भने पत्नीले पतिलाई नसोधेर पति सुत्ने ओछ्यानको मुनी सिन्दुरको डिब्बा राखिदिनु पर्दछ
त्यसपछि बिहान उठेर उक्त डिब्बाको सिन्दुर लगाउने गर्यो भने पनि तपाईको कुण्डलीको दोष मेटिन सक्छ। सूर्यलाई जल चढाउनेः विवाहित जोडिले हरेक बिहान सुर्यलाई जल चढाउने गर्यो भने पनि तपाईबीच हुने गरेको झगडा प्रेममा परिनत हुन थाल्दछ। गौमती चक्रः यति तपाई पति पत्नीबीच प्रेम बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले लगाउने गरेको सिन्दुरको डिब्बामा एउटा गौमती चक्र राख्नु पर्दछ। किनकी उक्त चक्रलाई शुभ मानिने गरिन्छ।
Prevकुकुरले पुच्छर हल्लाउनुका रोचक कारण यस्तो छ !
nextदिउँसो सुत्ने बानी छ भने सावधान ! निम्तिन्छ यस्ता घातक समस्याहरु